Tsy fandriampahalemana : Efa raharahan’ny governemanta -
AccueilRaharaham-pirenenaTsy fandriampahalemana : Efa raharahan’ny governemanta
Tsy fandriampahalemana : Efa raharahan’ny governemanta
13/06/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny faran’ny herinandro lasa teo no fantara fa efa nisy ny fivoriana izay natrehin’ ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta manoloana ny tsy fandriampahalemana misy eto Madagasikara « efa raharahan’ny governemanta ity resaka tsy fandriampahalemana ity fa tsy anjaran’ny ministera irery ihany na anjaran’ny fitondram-panjakana”. Nandritra io resaka nifanaovana tamin’ny filoham-pirenena io ihany no nanazavany fa « misy ny olona tsy manao afa- tsy io asa ratsy io ary tsy tokony hisy ny fifalian’ny mpanao politika manoloana izany”. Ary manoloana izay voalaza rehetra izay dia tsy tokony hisy ny fandeferana avy amin’ny vahoaka malagasy, satria tokoa tsy mipetrapetraka etsy sy eroa amin’ny tanàna iray ireo mpanao ratsy ireo, fa kosa mirihariha ka mifindrafindra. Ny tsirairay tokoa dia samy tokony handray andraikitra hampilaza ny manampahefana, raha toa misy ny olona mampiahiahy tonga eo amin’ny tanàna izay itoerany. Azo lazaina avy hatrany izany fa efa mandeha ny fanadihadiana manoloana ny fanakorontanana iniana atao eto amin’ny tany sy ny firenena, satria dia tsy tongatonga ho azy ihany koa ny zava- misy tahaka izao. Raha ny fanazavana nomen’ny filoham-pirenena.
Manoloana io toe- draharaha iniana volena eto amin’ny firenena io dia nilaza ihany koa ny minisitry ny filaminana anatiny ny contrôleur général Jean Jacques Andriamisa fa “efa tsy raharahan’ny ministera irery intsony ity tsy fandriampahalemana eto amin’ny tany sy ny firenena ity, fa efa lasa raharahan’ny governemanta mihitsy”. Noho izany ny faran’ny herinandro lasa teo dia efa niroso tamin’ny fanombohana ny firesahana sy ny fivoriana mikasika ny paik’ady izay hoentiny ny governemanta. Amin’ny faran’ny herinandro ho avy izao kosa dia efa hisy ny vokatra izay ho azo manoloana ny fampiharana ny tapaky ny governemanta, tsy hisy ihany koa ny fitsitsiana ireo izay fantatra fa mihoa- pefy manoloana izao tsy fandriampahalemana izao.
Efa ela rahateo ny filoham-pirenena no efa niandrandra ny fampihavanana, mba hampilamina ny tontolo iainan’ny Malagasy, saingy izao dia efa misy sahady ny fanararaotana, indrindra eo amin’ny lafiny politika. “Tsy vao izao fa efa ela aho nandritra ny fanombohan’ny fitantanako ny fitondrana firenena dia efa ny fampihavanana no vaindohan-draharaha, kinanjo izao no zava- misy” hoy hatrany ny filoham-pirenena . Noho izany dia mbola nanamafy ny fiaraha- mientan’ny vahoaka ny filoha Hery Rajaonarimampianina mba hiara- misalahy amin’ izao tsy fandriampahalemana izao.
Filoha nitsidika an’i Zambie : Noraisina tamin’ny fomba manetriketrika
Vao nigadona ny seranam-piaramanidina Kenneth Kaunda seranam-piaramanidina iraisam-pirenen’i Zambie ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia noraisin’ny filoha zambianina Edgar Lungu tamin’ny fomba manetriketrika. Nisy ny fanapoahana tafondro miisa in-21, izay natokana handraisana Filoham-pirenena manatanteraka fitsidihana ara-pomba ...Tohiny
Lalan’ny Frankôfônia : Hikatona noho ny fanamboarana
Tsy fanekena hala-bato : Hihamafy ny hetsika manomboka anio
Toamasina : VAHOAKA ANALINY MANOHANA NY FILOHA
Fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana : Tokony hazava ny lalàna hoy ireo fiarahamonim-pirenena